Qaxooti lug uga soo tillaabay buundada Öresundsbron - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Qaxooti lug uga soo tillaabay buundada Öresundsbron
La daabacay fredag 27 maj 2016 kl 13.30
"Waa qatar loo bareeray"
Nu är Gribshunden över på danska sidan. sawir: Mikael Eriksson/Sveriges Radio.
Qaxooti lug uga soo tillbay buundada kalo qeysbisa Danmark iyo Sweden
Markii ugu horeysay ayaa koox qaxooti ah waxay lug uga soo tillaabeen buundada kalo qeybisa Danmark iyo Sweden. Buundadan ayaa loogu tallo gelin in dadka ku lugeeyaan, taas oo welwel abuurtay, sida ay tiri Sanna Holmqvist oo ah madaxa isgaarsiinta buundada Öresundsbron.
– Gaar ahaan godka tareenku maro waa mid qatar badan. Waa ciriiri tareenkana waxuu ku maraa xawaare gaaraya 180 kilomitir sacaaddii. Ma loogu talo-gelin in lagu lugeeyo godkan marka tareenka marayo, aad ayey u qatar badan tahay in lagu lugeeyo, ayey tiri.
Kadib markii lagu soo rogay xaduudaha aqoonsi bilowgii sannadka ayey dadka qaxootiga ah ee Sweden ku soo jeeday waxaa ka istaagtay fursaddii ay ku raaci jireen tareenada labada dal iskaga kalo goosha. Taas oo keentay in qaar badan isku biimeeyaan sidii ay uga gudbi lahaayeen boondada labada dal kalo qeybisa. Waqtiyadii ugu dembeeyey waxaa la diiwaan geliyey 55 dhaco oo ah qaxooti isku biimeynaya boondada oo ku lugeynaya halka tareenka maro.
– Todobaadyadii ugu dembeeyey markii cimilada kululaatay waxaan aragnay dhacdooyin badan oo noocaan ah ayey tiri Sanna Holmqvist madaxa isgaarsiinta buundada.
Habeynimaddii 12ka maj ayey dhowr dhallinyaro ah ka soo tillaabeen una soo gudbeen dalka Sweden, sida lagu weriyey News Öresund.
– Kaamerooyinkeena ayaa qabtay, waana u jeednay, bolis ayaa loo diray, laakiin kadib waxay iska diiwaan-geliyeen maxadada Lernack, ayey Sanna Holmqvist.